बधाई, नेपाली सेनालाई बधाई
गत बिहीवार महाशिवरात्रि, धूमधामका साथ भक्तिपूर्वक नेपाल लगायतका समस्त हिन्दू नरनारीले मनाए । महाशिरात्रिकै दिन, नेपालको राष्ट्रिय सेना, नेपाली सेनाले सदाझैं आफ्ने सेना दिवस पनि मनायो ।
हाम्रो नेपाली सेना गौरव गर्न लायक सेना हो । नेपाल एकीकरणदेखि एकीकृत नेपाली भूभागको सुरक्षासम्म नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । अब कतिपय आलोचनाले गोर्खाली सेना यो नेपाली सेना थिएन भनेर भने पनि बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई अझै शिरोपर गरेर बसेको त्यो गोर्खाली सेना यही नेपाली सेना हो भनेर ठाकुवाका साथ भन्न सकिन्छ । अझ केही उग्र आलोचकहरूले सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गरिरहेकाले अब नेपाली सेनाको भूमिका शून्यमा झरिसकेको भनेर बताए पनि देश निर्माण, दैवी प्रकोप न्यूनिकरणदेखि आन्तरिक सुरक्षामा समेत यदाकदा नेपाली सेनाको अझै उपयोग भइरहेकाले नेपाली सेनाको भूमिका अझ विस्तार भएको भनेर जिकीर गर्ने यसका प्रशंसकहरू पनि थुप्रै छन् । अघि पञ्चायतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बलमा स्थापना गरिएको र सेनाकै बलामा टिकाइएको भन्नेदेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ऐतिहासिक भूल भनेर प्रचारित माघ १९ को कदम पनि सेनाकै बलमा भएको थियो भनेर सम्झिनहरूले के बुझुन् कि नेपाली सेना विधि र संविधान अनुसार गन भएको राष्ट्र प्रमुख र सरकारको आदेशलाई शिरोधार्य गर्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम गलत मनसुवाले गरिएको थिएन । राजनीतिक दलहरूले अनन्तकालसम्म चुनाव नगराइ पालैपालो सत्ताको रसास्वादन गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि देश र संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि तीनवर्षभित्र चुनाव गराई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्रा हस्तान्तरण गर्न त्यो कदम चालिएको थियो । अझ स्थानीय निकायको चुनाव पनि गराइसकिएको थियो । राजाको यही सही र प्रजातान्त्रिक आशयलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले साथ दिएको थियो । संविधान नै सेनाको सर्वोपरि हो ।
अब २०१७ सालको राजा महेन्द्रको शाही कदममा पनि मुलुकको हालत यसतै खराव भएपछि राजाले सेनाको साथ लिएर सत्ता हातमा लिएका थिए । फेरि पनि भनौं नेपाली सेना शासकहरूको सही मुनसुवालाई साथ दिन्छ । नेपाली सेना प्रचलित संविधान र त्यस अन्तर्गत रहेबसेका शासकको आदेश, निर्देशन र निर्णयहरूको पालना गर्छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई लिएर अधिकांश नेपालीहरू नेपाली सेनाले यी सब भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूलाई जेलमा हालोस् भन्ने आकांक्षा राख्छन् । जनता भन्छन्– सेनाले मुलुकको खराव हालतको अध्ययन गरेको होला, सत्तामा हालमा लिन किन अघि सरेन ? यो कुरामा चाहिं केही तथाकथित विश्लेषकहरू सेनाभित्रको अराजकता कोट्याएर विषयान्तर गर्न खोज्छन् । यसरी कानुन, अनुशासन, देशप्रेमले ओतप्रोत, जनता र देशप्रति जिम्मेवार व्यवसायिक संस्थालाई बिबादमा मुछ्नु गलत हो ।
बुझ्न जरूरी के छ भने नेपाली सेनामा राजनीतिक चस्का छैन ।
नेपाली सेनाले संविधान अन्तर्गत कार्य गर्छ । भन्नेहरू त यो शासन व्यवस्था नै अवैधानिक रूपमा स्थापित भएको भनेर आरोप लगाउँछन् । र, सेनाले देशलाई त्रास दिनुपर्छ । शासन गर्ने यिनै नेता हुन्, यी नेतालाई चुन्ने हामी जनता हौं । संविधान हामी जनताकै जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेका हुन् । यसकारण पहिलो दायित्व गलतलाई गलत भन्न सक्ने हैसियत जनतामा हुनुपर्छ । जनताका साथमा सेना सदैव रहेको छ, रहने छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा स्वागत जनताले गरे । ८३ जना टीके सांसदको कोटा दिंदा जनता खुश थिए । माओवादीलाई चुनाव जिताउने जनता हुन् । माओवादीलाई चुनाव हराउने जनता हुन् । जनताका सुझाव धोक्रोमा हालेर इसाईकरण बढाउने संविधान जारी गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । संविधानको स्वागत गर्ने र अहिले आएर संविधान निकम्मा भयो भन्ने पनि जनता हुन् । तर यो निकम्मा संविधान फाल्न नसक्ने पनि जनता हुन् । आफूले छानेका र जानेका प्रतिनिधिले जतिसुकै भ्रष्टाचार र अनैतिकतापूर्ण काम गरे पनि खबरदार गर्न नसक्ने जनता नै हुन् । जबसम्म जनतामा पीडकलाई दण्ड दिने साहस आउँदैन,यस्तै गाईजात्रे राजनीति चलिरहने छ । सेनाले सत्ता लिइदियोस् भन्ने कामनाले मात्र काम गर्न सक्नेछैन ।
विधि यस्तै छ, यसैले सेना यिनै नेताको सुरक्षामा पनि खटिएको छ । किनकि तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सेना जनताबाट निर्देशित छ । देशको सीमा खुम्चिदै गएकोमा पनि सेना चिन्तित छ, त्यसैले सबै निकायमा सेनाको उपस्थिति भएको छ । जनताले बुझ्नुपर्ने सवाल के हो भने आफ्नै मतले सिंहदरवार र शीतल निवास पु¥याइएका प्रतिनिधिहरू किन जनघाती, देशघाती काम गरिरहेका छन् ? संविधानअनुसार जनताबाट निर्वाचित सरकारले भनेको अह्राएको विकासदेखि शान्तिसम्म, उद्धारदेखि विपत व्यवस्थापनसम्म, शिक्षा र अन्य कार्यमा समेत काम गरिरहेको छ । सेनामाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत जनतामा हुनुपर्छ ।
सेनाभित्र भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास जारी छ । भ्रष्ट तत्वमाथि कारवाही र शुद्धिकरण पनि भइरहेकै छन् । अन्तमा, नेपाली सेनालाई सेना दिवसका २०७७ को अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । नेपाल र नेपालीका पक्षमा सधैं उभिन सकोस्, शुभकामना ।